भिडियो – Online BudhaNilkantha
के यौ’न स’म्पर्कबाट कोरोना भाइरस सर्छ?
कोरोना भाइरस नयाँ भएकाले यसबारे धेरै अध्ययन र अनुसन्धान हुन बाँकी छ। संक्रमित व्यक्तिसँग हात मिलाउँदा, अंकमाल र चु’म्बन गर्दा थुक र र्याछलका छिटाबाट कोरोना भाइरस अर्को व्यक्तिमा सर्ने विज्ञहरु बताउँछन्। त्यसैले भाइरसको संक्रमणबाट बच्न एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिबीच दूरी कायम राख्न, हात नमिलाउन, मास्कको प्रयोग गर्न, साबुनपानीले हात धुन चिकित्सकको अनुरोध छ। कोरोना भाइरस कसरी सरिरहेको छ? यो भाइरस कुन-कुन माध्यमबाट कसरी सर्छ भन्ने विषयमा अझै अध्ययन भइरहेका छन्। यौ न सम्पर्कका माध्यमबाट यो भाइरस अर्को व्यक्तिमा सर्न सक्छ कि सक्दैन ? पछिल्लो समय यो विषयमा धेरै जिज्ञासा उठ्न थालेका छन्। हामीले यही प्रश्न विज्ञहरुलाई सोधेका छौं। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा शेरबहादुर पुन चीनमा गरिएको अध्ययनले पुरुषको वी र्यमा कोरोना भाइरस देखिएको बताउँछन्। तर वी र्यमा भएको क
काठमाण्डौं । कोरोना महामारी अवस्थामा आफुहरुलाई मौखिक रुपमा निकालिएको भन्दै शिक्षकहरु आन्दोलित भएका छन् । संस्थागत बिद्यालय शिक्षक युनियन राष्ट्रिय समितिको आयोजनामा शिक्षकहरुले शुक्रबार काठमाडौंको माइतिघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले विनाकारण कामबाट निकाल्ने क्रम बन्द हुनुपर्ने माग राखेका छन् । त्यस्तै लकडाउनको अवधिको सेवा सुविधाका साथै तलव दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । निजी बिद्यालयका शिक्षकहरु समस्यामा पर्दा पनि सरकार मौन रहेको भन्दै उनीहरुले आपत्ती जनाएका छन् । आफुहरुको जायज माग पुरा गर्न विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने समितिले जनाएको छ । त्यस्तै कोभिड–१९ को नियन्त्रण एवं रोकथामका लागि सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दीको अवधिमा तलब–सुविधा नपाएको भन्दै झापाका निजी विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । विभिन्न चरणमा सरोकारवालालाई आफ्ना समस्याका विषयमा अवगत गराए पन
पछिल्लो समय युटुबमा धेरैनै खोजिने चर्चित गायक अमृत सापकोटा र बाल गायिका अयुसा गौतम बीच पहिलो सहकार्य भएको छ उनीहरु बिचको पहिलो गीतको सुटिङ्ग सम्पन्न भएको छ।आयुसाले निकै राम्रो नाच्न सफल भएकी छिन यो गीतमा सोहि क्रममा आयुसा र अमृत बीच बबाल दोहोरी चलेको छ। पहिलोपटक आयुसा संग दोहोरी खेलेका अमृतले आयुसालाई जित्न मुस्किल भएको बताए भने आयुसा जस्तो सस्कारी कलाकार अहिले सम्म नजन्मिएको अमृतको जिकिर छ।उनि जस्तो सबैलाई सम्मान र आधार गर्ने कलाकारहरु दोहोरीमा पाउन मुस्किल भएको भन्दै सबैले उनीबाट सिक्न अनुरोध गरे।हेरौ यो बिशेष कुराकानी :
बुढा नेताहरुले अब राजनीतिबाट सन्यास लिनु पर्छ, युवालाई देश चलाउन दिनु पर्छ : गगन थापा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले टेस्टेड भैसकेको नेताहरुले अब राजनीतिबाट सन्यास लिएर युवालाई देश चलाउन दिनपर्छ भनेका छन् । शुत्र टिभीको शुत्र बहसमा उनले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले एकाएक अध्यादेश ल्याएर अरुको पार्टी फुटाउनेसम्मको तयारी गर्दा आफ्नै पार्टी फुट्नेसम्मको स्थितिमा पुगेको समेत उनले बताए। केही दिनपहिले प्रतिपक्षी दलसहित आम नेपालीले सरकारलाई साथ दिएको स्मरण गर्दै योभन्दा अनुकल अवस्था कहिल्यै नभएको उनले बताए। ‘अध्यादेश नल्याउन्जेल सबैले के भनिरहेको थिए भने तपाई हाम्रो अभिभावक हो। हाम्रोसेनापति हो। यो लडाई तपाइले हार्नुभयो भने हामी पनि हार्छौं। सर्वश्व गुमाउँछौं। सबैले भनिरहेको कुरा यहि त थियो। योभन्दा अनुकुलको अवस्था ओलीले खोज्नु भएको चाहि के हो? ‘सरकारले एउटा कोष बनायो। सबैभ
काठमाडौं । पविता विकको रहस्यमय निधन भएपछि उनको माइती पक्षले घटनाको छानविन गर्न माग गरेका छन् । माइतीका पक्षले छोरीको ह त्या भएको भन्दै छानविनको माग गरेका छन् । अन्तरजातिय विवाह गरेका उनीहरुको बिचमा राम्रो सम्बन्ध थिएन । बारम्बार उनीहरुबीच झगडा भइरहन्थे । रामेछापवाट विवाह गरेर आएकी युवतीको अचानक निधन भएपछि अहिले सो घटना पेचिलो बन्दै गएको हो । उनका श्रीमान दोलनले श्रीमतीले ले देहत्याग गरेको बताएका छन् भने युवतीका भाई विक्रम विकले दिदीको ह त्या भएको भन्दै छानविनको माग गरेका छन् । घटना विवरण सुनाउँदै दोलन भन्छन्, हामी कोठामै थियौं । बच्चाहरु कोठामा खेलिरहेका थिए । मैले मम ल्याइदिएको थिए । उनलाई म म खाउ म कौशी जान्छु भनेर गए । मेरो गल्ती त्यही हो । म कहिल्यै कौशी गएको थिइन् । कौशीमा गएर मोवाइलमा ४२ मिनटको शो हेरेर फर्केर आउँदा मेरो श्रीमती झु ण्डि’एको अवस्थामा देखे । म फर्केर आउँदा झु’ण्डि’र
काठमाडौं । अभिनेत्री साम्राज्ञीले अहिले आफ्ना कुरा आफ्नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गर्ने गरेकी छन् । मिडियामा अन्तरवार्ता दिँदा आफु जे होइन त्यही देखाउने कोशिष गर्ने र हेडलाइन पनि जे पायो त्यही बनाएर कुरालाई अर्कै बनाउने गरिएका कारण अब अन्तरवार्ता नदिने निर्णयमा पुगेकी उनी अहिले आफ्ना कुरा आफ्नै हेण्डलमा रहेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै सार्वजनिक गर्ने गरेकी छन् । नायीका साम्राज्ञीले आफ्नो फिल्ममा लागेको ५ वर्षको अवधिमा भोगेका नराम्रा अनुभव सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गर्ने गरेकी छन् । ५ वर्षको अवधिमै राम्रो चर्चा कमाएकी नायीकाले ८ वटा छुट्टा छुट्टै ब्यानरमा फिल्म गरेकी छन् । यसो गर्नुको कारण बताउँदै उनले फिल्म निर्देशक र फिल्म निर्माताले गर्ने ब्यवहार भएको बताएकी छन् । उनले कलाकारलाई फिल्म निर्माताले नराम्रो ब्यवहार गर्ने गरेको भन्दै भिडियो सार्वजनिक गरेपछि फिल्म क्षेत्रमा व
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो पोष्ट गरपछि अहिले चर्चामा रहेकी नायीका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले मिडियामा अन्तरवार्ता नदिने बताएकी छन् । केही मिडिया र युट्युवरले आफुहरुका कुरालाई नराम्रो बनाएर पस्कने गरेका कारण तनाव झेल्नु परेको भन्दै उनले युट्युव र मिडियामा अन्तरवार्ता नदिने बताएकी छन् । उनले आफुहरुलाई नै नराम्रो बनाएर पैसा कमाउनेहरुलाई अब मौका नदिने बताएकी छन् । तर एउटा अन्तरवार्तामा आएकी साम्राज्ञीले यस्तो अन्तरावार्ता पहिलो पटक अनुभव गरेको बताएकी छन् । निकै राम्रो अन्तरवार्ता दिन पाएकी साम्राज्ञी धुरुधुरु रोएकी छन् । उनी आफु निकै भावनात्मक भएका कारण सानो कुराले पनि आँशु आउने बताएकी छन् । अन्तरवार्ताकारले के कुराले तपाईलाई असर गर्छ भनेर प्रश्न गर्दा नै उनी भावुक भइन् र रुन लागिन् । उनले भनिन्, मैले कहिले पनि यस्तो अन्तरवार्ता दिएकी थिइन्, जहिले पनि हाम्रो बारेमा नकारात
अत्यन्तै दुख गरेर संगित सिकेकी नेहा कक्कडको स्वरमा जादु नै छ । उनको बुबा समोसा व्यापारी थिए । अत्यन्तै दुख पीडा सहेर हुकिएका थिए । त्यो बेला नेहाले रेलको डिब्बा डिब्बामा गएर गीत सुनाएर हामीलाई पैसा पठाउने गर्थी ।” यसै पनि बलिउडमा नातावाद र धनी मानिसहरुले मात्र स्थान पाउँछन् भन्ने कुरा छलङ् रुपमा बाहिर आएको छ । अहिले त झन् सुशान्तको निधनले बलिउड नै स्तव्ध बनेको छ । सुशान्तको आत्माको शान्तिको कामना गर्दै सबै कलाकारहरुले दुख व्यक्त्त गरे । बलिउडकी चर्चित गायिका नेहा कक्कडले इन्टाग्राम मार्फत सुशान्तलाई श्रद्धाञ्जली दिएकी छिन् । उनले आफ्नो प्रिय साथी सुशान्तको लागि गीत गाएकी छन् । हेरौं भिडियो उनले इन्टाग्राममा सुशान्तलाई सम्झेकी छिन् भने भारतीय मिडियामा उनको बारेमा कुरा गरेकी छिन् । र यो पनि :समोसा बेचेर संगित सिकेकी नेहाको नयाँ रोमान्टिक गीतले मच्चायो धुम उन
गायिका प्रिती कौरले आफू नेपालमै जन्मिएको र यहीँ केही गरेर मर्ने चाहना भएकोले आफूलाई नेपाली नागरिकता लिनबाट किन बञ्चित गरिएको हो ? भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् । शुक्रबार राति प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको विशेष कुराकानीमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै गायिका कौरले यस्तो बताएकी हुन् । उनले नेपाली नागरिकता लिनको लागि आफू योग्य रहेको पनि बताईन् । अहिले उनी भारतीय पासपोर्ट बोकेर हिँड्न बाध्य भएको बाध्यतापनि सुनाईन् । कुराकानीको क्रममा लिम्पियाधुरा नेपालको हो, भारतले फिर्ता गर्नैपर्छ बताएकी छिन ।प्रितीको प्रश्न छ, ‘मेरो जन्मभूमि र कर्मभूमि नेपाल । बिहे पनि यहीं गरें । तर नागरिकता नपाउने । अन्याय भएन र ?’ प्रितीको पहिलो गीत सन् २००४ मा रेकर्ड भएको थियो । त्यसको अघिल्लो वर्ष उनको सांगीतिक समूह ‘निभा’ ब्यान्ड प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट ठहरिएको थियो । उनीबाहेक सबै सदस्य केटा थिए । रक–पपमा क